TANTARAN’AMBOHIMANGA – Archives Nationales
14 octobre 2014 culture, histoire
Ambohimanga dia tanàna miorina an-tendrombohitra mifono ala, 20 km avaratr’Antananarivo. Renivohitr’Imerina izy taloha ary iray amin’ireo tanàna telo lehibe mandrafitra an’Antananarivo Avaradrano (Ilafy, Ambohidrabiby, Ambohimanga). Renivohitry ny foko hova «Tsimahafotsy» ihany koa.
Tsimadilo no anaran-tany niorenan’Ambohimanga fahiny elabe ary ny tanàna dia Mahandrihono. Izany Andriamborona izany no nanao azy hoe Ambohitrakanga, ary Andriamasinavalona (na Andriantsimitoviaminandriana zanany) kosa no nanova azy ho Ambohimanga.
Na dia voalaza ho nonenan’Andrianjaka aza Ambohimanga, dia tamin’ny andron’Andriantsimitoviaminandriana no tena niantombohan’ny lazany ary tamin’Andrianampoinimerina no nampamirapiratra azy indrindra.
Tao Ambohimanga no niantomboka nanjaka Andrianampoinimerina vao namindra ny renivohiny ho eto Antananarivo taty aoriana. Nohamafisiny ny fiarovana ny tanàna: novitainy ny hadivory ivelany izay efa nisy kely teo aloha ary dia nampana hadivory tao anatin’io indray. Nasiany vavahady fito ny tanàna: Ambatomitsangana tao atsinanana; Andakana tao andrefana; Amboara tao avaratra; Miandrivahiny tao andrefana avaratra; Ampitsaharana tao atsimo andrefana; Andranomatsatso tao atsimo; ary Antsolatra tao atsimo atsinanana. Raha natao ho fivoaham-paty Amboara sy Miandrivahiny, ny telo atsimo (Ampitsaharana, Andranomatsatso, Antsolatra) kosa natao ho fitiliana fahavalo.
Nizarana tanimbary teny amin’ny manodidina ny mponina.
Nataon’Andrianampoinimerina mafy koa ny lalàna momba ny fahadiovana tao Ambohimanga: fady ny manary loto; ary na dia ny katsaka sy ny voatavo aza dia tsy navelany nambolena tao; natokana toerana tany ivelan’ny tanàna nandritry ny 3-6 volana ny olona voan’ny nendra.
Nataony tanàna masina foiben’ny fivavahana amin’ny sampy koa Ambohimanga: ny sifotra, ny sokina, ny kisoa, ny soavaly, ary ny vahiny hafa firenena dia tsy navelany niditra tao. Ny fantàka dia tsy azo nataina noho izy mitovy anarana amin’ny sampy Fantàka tao an-tanàna.
Nanao lalàna mafy koa Andrianampoinimerina mba tsy hanimbasimbana ny ala: “Izay manongotsongo ny ala dia mba hotsongotsongoin’Andriamanitra “, hoy izy; omby iray sy vola ariary no sazin’izay mandika izany. Raha misy tera-bao anefa dia azo angatahan-dalana hakana kitay ao an’ala ihany.
Nataon’Andrianampoinimerina ho Amparihy na Amparihimasina ny anaran’ny dobo tao am-body tanàna. Tao no fakàna rano handroan’ny andriana mbamin’ny hanaovana hasoavana ary hisantarana ny tao-tranon’ny mpanjaka.
– Ambatomiantendro: vatolampy avo eo an-dohasaha atsimo Atsinanana izay fitazanana sy fanaovana fanorona fanitaran-tsaina.
– Ambatorangotina: teo ny loholona 12 lahy tamin’ny Tsimahafotsy no nilaza ny fanonganana an’Andrianjafy (zanak’Andriambelomasina zanak’Andriamasinavalona) sy ny fananganana an’Andrianampoinimerina (zanak’anabavin’Andrianjafy).
– Fidasiana: kianja malalaka alokalofan’ny alan’amontana ao an-tampon-tanàna izay nasian’Andriatsimitovinandriana orimbato (tonga vatomasina fitaingenan’ny andriana rehefa miseho, fikabariana amin’ny vahoaka, fandrarahana ny ran’ny omby volavita izay isaorana amin’ny Fandroana).
Ambohimanga milanona eo Fidasiana
– Bevato ao Fidasiana (avaratra indrindra) nonenan’Andriatsimitoviaminandriana
– Mahandrihono (avoavo kokoa ny misy azy) nanaovan’Andriambelomasina fahavelon-drainy trano, dia Mahandry.
– Nanjaka no lapa fahatelo (eo an-tendron’ny avon’ny tanàna, avaratra atsinanan’i Mahandry).
Rova ao Ambohimanga
Nisy sampin’andriana na ny forongony notehirizina tao Ambohimanga:
– Fantàka izay mpiaro amin’ny ady. Tsy navela ho faty jiro ny efitra nisy azy tao Bevato.
– Manjakatsiroa. Tian’Andrianampoinimerina indrindra izy io ka nentiny nanaraka azy mandrakariva. Tao Manjakamiadana (Ambohimanga) no nisy sy nandorana azy tamin’ny 1869.
– Ny forongon’i Kelimalaza fa ny tena sampy Kelimalaza kosa tsy niala tao Ambohimanambola. Nisy forongon’io sampy io koa tany Amparafaravato (avaratr’Ambohimanga).
– Boky firaketana ny fiteny sy ny zavatra malagasy; p.359-362
– Dictionnaire historique et géographique de Madagascar; p.29
– Tantaran’i Madagasikara isam-paritra; p.530-531
Ambohimanga, Andrianampoinimerina, Imerina